Shirwaynaha Dawlad Deegaanada Dalka iyo Deeq-bixiyeyaasha Caalamka Oo Kafurmay Addis - Cakaara News
Shirwaynaha Dawlad Deegaanada Dalka iyo Deeq-bixiyeyaasha Caalamka Oo Kafurmay Addis
Addisababa(CN) Isniin, 16ka Nov. 2015, Waxaa saaka si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka ee ghion hotel addis shir wayne ay isugu yimaadeen dawlad deegaanada dalka iyo deeq-bixiyeyaasha caalamka(JRIS meeting).
Shirwaynahan ayaa lagu qiimaynayay waxqabadkii shantii sano ee ugu dambaysay gaar ahaan barnaamijka kor u qaadida adeegyada aas aasiga ah (PBS) ee dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, jidadka, beeraha, biyaha, dakhliga, nidaamka maamulka maaliyadeed iyadoo halkaa laga soo jeedinayay warbixino kaladuwan iyo daraasaadyo cabiraya heer daloolka ay gaadheen adeegyada aas aasiga ah ee deegaan walba.
Hadaba shirwaynahan ayaa waxaa deegaankeena uga qayb galay wafti uu hogaaminayo madaxweyne kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan. Kuwaas oo ka kala socday xafiisyada heer deegaan ee kala ah: maaliyada, caafimaadka, biyaha, beeraha, jidadka, dakhliga, haweenka, baarlamaanka, Hantidhawrka guud iyadoo uu hogaaminta shirkana kamid ahaa wasiirudawlaha wasaarada maaliyada dalka mudane Axmed Shide.
Shirwaynahan oo socon doona mudo 4 maalmood ah ayaa natiijooyinka kasoo baxa dib idin kala soo socod siin doonaa.